Abwaan Hadraawi oo Ka Warramay Xaaladdiisa Caafimaad – Goobjoog News
Abwaan Hadraawi oo Ka Warramay Xaaladdiisa Caafimaad
Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo Soomaalida dhexdooda magac weyn ku leh ayaa ka warramay xaaladiisa caafimaad oo todobaadyadii ugu dambeeyey si weyn loo hadal hayay in caafimaadkiisu aad u liito oo laga dayrinayo.
Abwaan Hadraawi oo ku nool magaalada Burco ayaa mar uu ka sheekaynayey xaaladiisa waxa uu xusay in xanuun uu hayo balse aanu ahayn xanuunkaasi mid uu la jiifsaday oo la il daran yahay, waxaanu yiri Abwaanku; ” Waa bukaa balse ma ihi bukaan jiif qofku inuu xanuusado waxay ka mid tahay nolosha iyada oo noqon karta uun labo inuu geeriyoodo qofkaasi iyo inuu ka bogsado “.
Abwaan Hadraawi oo la weydiiyey in uun maqlay wararka laga faafiyey xaaladiisa caafimaad waxa uu yiri, “ Alle ayaa Soomaalida i jeclaysiiyey waxaan odhan karaa waxay waxaasi oo dhan u sheegayaan waa jacayl la ii qabo oo qof kastaaba isleeyahay ka kale uga warran adigu“ , Ayuu yiri Hadraawi.
Abwaan Hadraawi oo Burco inta badan ku noolaa mudadii 20-kii sanno ee ugu dambeeyey ayaa wali waxa uu qayb ka qaataa nolosha bulshada iyo wacyi-gelintooda isaga oo ka qayb gala barnaamijyada iyo xusaska muhiimka u ah bulshada , waxaana sidoo kale ku booqda gurigiisa dad dhallinyaro u badan kuwaasi oo waanooyin iyo waayo-aragnimadiisa uu uga warramo.
Abwaan Hadraawi ayaa safka hore kaga jira Abwaanada Soomaalida suugaantoodu nolosha dadka la falgasha ilaa bahda hal-abuurku u bixisay magaca Boqorka hal-qabsiga .
Muuqaal: Bil Kadib Qaraxii Zoobe Waa Sidee Xaaladda?
Saameynta Taargooyinka Kala Nuuca Ah Ee Ay Sameysteen Maamul Gobaleedyada Dalka
Shelf Life Teva 3109 viagra Cialis Original De La India
Kmj Radio Ads Viagra Comprare Levitra Su Internet Cialis E Antidepressivi [url=http://cialibuy.com]Buy Cialis[/url] Kamagra Yan Etkileri
How Can I Buy Cialis Discount Online [url=http://cialibuy.com]Cialis[/url] Zithromax Ear Infection Adults Cialis Where To Buy Acticin
Amoxicillin And Clavulanate Potassium Tablets [url=http://abcialisnews.com]Buy Cialis[/url] Rx Online Pharmacy Cialis Brand Levitra Online Usa Pharmacy
Lipitor Generic Online No Presciption [url=https://apcialisle.com/#]Cialis[/url] Cephalexin And Ibuprophen buy cialis cheap Online Propecia Prescription Drugs